Inona no karazana trano tsy fahita sy rano azo antoka amin'ny tontolo iainana? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no karazana trano tsy fahita sy rano azo antoka amin'ny tontolo iainana?
Ahitsio: Denny　2019-12-11　Mobile
Raha mila rano sy voaro amin'ny tontolo iainana ny gorodon-trano, dia ilaina ny mandinika ny valin'ny SPC fanalahidy. ny gorodona spc lock dia tsy ny tombony azo amin'ny fiarovana ny rano sy ny tontolo iainana ihany, fa manana koa tombony 8 ireto manaraka ireto:
1. Super anti-slip: Ny takelaka vita amin'ny lokon'ny SPC dia manana fananana anti-slip manokana.
2, mafana sy mahazo aina: tsara ny fitrandrahana mafana sy ny hafanana dissipation fahaizana, ny fametrahana ny hafanana fanamiana, ny fametrahana ny angovo azo avy amin'ny rano.
3. Porofom-panatanjahana: Polyvinyl klorida dia tsy misy fifandraisan'ny rano ary tsy ho malazo noho ny hamandoana be izy.
4. Light-maivana sy tsy mena-mena: Lamba fanakatonana SPC mazàna eo anelanelan'ny 3.2--12mm ny hateviny ary ny lanjan'ny lanja.Manana tombony tsy azo ampitahaina izy ireo amin'ny fananganana famorohana entana sy fitehirizana toerana eny amin'ireo trano avo, ary misy tombony ihany koa izy io amin'ny fanavaozana ny tranobe taloha. Tombontsoa manokana.
5. Ny fiarovana elastika avo lenta: Ny fahazoana SPC dia manana famerenam-bidy tsara amin'ny alàlan'ny fiantraikan'ny zavatra mavesatra, ary mahazo aina ny tongony.Malaza amin'ny anarana hoe "volamena tany malefaka" izy mba hanamaivana ny fahasimban'ny vatan'ny olona amin'ny tany, ary afaka manaparitaka ny fahasimban'ny tongotra. fiantraikany.
6, super-tahan-dakan'ny haavo: Ny velaran'ny rantsam-baravarana SPC dia manana fananganana teknolojia avo lenta mifangaro vita amin'ny haingon-trano azo entina. 50 taona.
7. Ny fanamafisam-peo sy ny fampihenan'ny feo: Ny vokatra fanamafisam-peo SPC dia mety hahatratra amina decibel mihoatra ny 20, izay tsy mifanaraka amin'ny fitaovana hafa mahazatra, ka mahatonga ny tokantrano.
8, famonoana afo: tsy afaka ny voajanahary, tsy miteraka entona misy poizina ary manimba.
Inona no karazana trano tsy fahita sy rano azo antoka amin'ny tontolo iainana? Ny atiny mifandraika